Umphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica Inyathelo elikhulu loNyulo olutsha lwe-UNWTO kunye noKhenketho lweHlabathi ngokubanzi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Umphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica Inyathelo elikhulu loNyulo olutsha lwe-UNWTO kunye noKhenketho lweHlabathi ngokubanzi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • ICosta Rica Iindaba eziDlayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • I-WTN
Obekekileyo. UGustavo Segura Sancho, uMphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica
Obekekileyo. UGustav Segura Costa Sancho, umphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica, usembindini wokhenketho lwehlabathi namhlanje. Uthatha inyathelo elikhulu kwixesha elizayo lokhenketho lwehlabathi ngokufuna ivoti eyimfihlo kwi-UNWTO General Assembly ezayo yokuqinisekisa ukuva ukuqinisekiswa okanye ukugatya uNobhala-Jikelele uZurab Pololikashvili kwixesha le-2022-2025.
Obekekileyo. UMphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica, uGustavo Segura Sancho, namhlanje uxelele ngokusemthethweni uNobhala Jikelele we-UNWTO, uMhlonishwa. UZurab Pololikashvili, malunga neCosta Rica ecela ivoti eyimfihlo yokunyulwa koNobhala Jikelele kwi-UNWTO General Assembly eMadrid.
ICosta Rica yaba lilizwe lokuqala ngokusemthethweni elenza ukuba kungenzeki ukuba nokuqinisekiswa kwakhona kwekota yesibini kuNobhala Jikelele kugqitywe ngokuvuma.
Eli linyathelo elikhulu eliya phambili kwihlabathi ekulweni konyulo olufanelekileyo kwesi sithuba esaqala ngo-2017 ngokuqeshwa kwasekuqaleni nguNobhala uZurab Pololikashvili.
Kwileta evulekileyo esayinwe ngooNobhala Jikelele be-UNWTO kunye namanye amagosa aphezulu angaphambili e-UNWTO, kwaye isasazwa IKomiti yeWorld Tourism Network Advocacy ngoMvulo, kwacetyiswa ngokukhawuleza ukuba ngokuhambelana nenqaku le-43 leMithetho yeNkqubo ye-UNWTO yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo, ukucela ivoti eyimfihlo kule nto ye-ajenda, kwaye ukuba ivoti igqiba, gunyazisa iBhunga eliLawulayo ukuba liqalise ngokutsha kwaye inkqubo yonyulo eyiyo.
Ngokuchanekileyo oku kwenzeka namhlanje kunye neCosta Rica ekhokela ngokukhawuleza kule ntshukumo.
Ngoku amazwe ahamba kwi-UNWTO General Assembly eMadrid ukususela ngoNovemba 28 - Disemba 3 anokuvota ngokunyanisekileyo ngaphandle kokwesaba. Ukuba i-2/3 yeevoti iqinisekisa isindululo seBhunga lesiGqeba sokuqesha kwakhona UZurab Pololikashvili, uya kumiselwa kwakhona. Ukuba uZurab akafumani 2/3 yeevoti, kuya kubakho unyulo olutsha kunye nabaviwa abatsha ukukhokela i-UNWTO kwixesha le-2022-2025.
Ngo-2019, igalelo eCosta Rica lokuhamba kunye nokhenketho laliyi-13.5% ye-GDP, isenza uhambo kunye nokhenketho lube yinto ebalulekileyo. ICosta Rica, ngokusemthethweni iRiphabhlikhi yaseCosta Rica, lilizwe elikuMbindi Merika kumda weNicaragua ukuya emantla, uLwandle lweCaribbean ukuya emantla-mpuma, iPanama ukuya emzantsi-mpuma, uLwandlekazi lwePasifiki ukuya kumzantsi-ntshona, kunye ne-Ecuador kumazantsi eSiqithi saseCocos. . ICosta Rica iphantse ilingane neDenmark ngobukhulu.
Le yileta engeniswe namhlanje yiCosta Rica kwi-UNWTO Secretariat Madrid:
ICosta RIca ifuna ngokusesikweni ivoti yokuvota eyimfihlo kwi-UNWTO General Assembly 2021
San Jose, ngoNovemba 15, 2021
Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO)
Ukubiza imibuliso yethu enovelwano, sithathe ithuba lokubhekisa kwiNqanaba lesi-9 le-ajenda yeNdibano Jikelele elandelayo yoMbutho ebizwa ngokuba “uNyulo lukaNobhala Jikelele wesithuba sowama-2022-2025 ukusuka kwisindululo seSigqeba soLawulo”.
Ngokubhekiselele koku, okudityaniswe sinkolelo yethu yokuba kule nkqubo kufuneka ibambe ukuqina kwemithetho yokunyanzeliswa koMbutho, ngakumbi kwindawo engaphaya kwe-UNWTO, sicela ngokusemthethweni:
Ukuba kuchongwe uNobhala-Jikelele kwithuba lika-2022-2025 makwenziwe ngevoti eyimfihlo yawo onke amalungu akhoyo nasebenzayo njengoko kuchaziwe kunyanzeliso lwemimiselo. ukuba umgaqo ukuba ubudlelwane phakathi States / UNWTO.
Olu xwebhu lwezikhalazo lusekelwe kwiSiqendu 43 semigaqo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo ethi:
“Inqaku lama-43. Lonke unyulo, kwakunye nokuqeshwa kukaNobhala-Jikelele, kuya kwenziwa ngevoti eyimfihlo”.
Sicela i-UNWTO General Secretariat ukuba ithathe zonke izibonelelo ezibonakalayo kunye nezobugcisa eziyimfuneko ukuze sikwazi ukuthobela ngokuhambelana nemithetho yangoku yonyulo ngendlela yokuvota okuyimfihlo kuNobhala-Jikelele olandelayo we-UNWTO.
UMphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica